izixhobo zangaphakathi nezangaphandle - China Gormeet Plastic
Olu didi lubandakanya ngesibetho iimveliso moldings un-hlulwa, ezifana: igumbi nokuStorisha Oku kulula-to-ndawonye ishedi yokugcina yangaphandle inokubekwa naphi na kwendlu okanye kumgangatho apho kufuneka yokugcina. Elaphalazwayo yokugcina Igadi yangaphandle inophahla luthi. ngokuba ngokugqibeleleyo yokugcina izixhobo zakho ingca, nezixhobo ezemidlalo, matshalatshala okulala, le ishedi ubhetyebhetye kwaye ixesha elide. Bezifo iimveliso Ukusuka sihlale eziphathwayo izindlu ezinkulu inja ngaphandle, sinawo izikhuselo zeseyile eziyimfuneko kunye izincedisi ukuba avumelane kakuhle ngomntu yakho ...
Olu didi lubandakanya ngesibetho iimveliso moldings un-hlulwa, ezifana:
Le ishedi yokugcina yangaphandle lula-to-ndawonye inokubekwa naphi na kwendlu okanye kumgangatho apho kufuneka yokugcina. Elaphalazwayo yokugcina Igadi yangaphandle inophahla luthi. ngokuba ngokugqibeleleyo yokugcina izixhobo zakho ingca, nezixhobo ezemidlalo, matshalatshala okulala, le ishedi ubhetyebhetye kwaye ixesha elide.
Ukususela sihlale eziphathwayo izindlu ezinkulu inja ngaphandle, sinawo izikhuselo zeseyile eziyimfuneko kunye izincedisi ukuze ilungele nezidingo zakho, ubungakanani kunye imozulu kweyadi yakho. Enoba yintoni uhlobo qabane unayo, indlela nganye iindidi zobungakanani, ngoko ungakhetha indlu efanelekileyo enkulu okanye ezincinane inja ukuba isilwanyana sakho.
I ezintsha Pet Gear Inyathelo kunye ngamasondo inika izilwanyana kwithambeka gentle eyenza kube lula ukuba bakwazi ukufikelela sofas, iibhedi, kwaye ngaphezulu. Kuba eyenziwe ngeplastiki ixesha elide oluxonxiweyo weza ukhethe iinketho umbala. Ekhaphethini yi asuswayo kwaye umatshini zihlambeke. Izinikele intuthuzelo kunye nokhuseleko izilwanyana zakho, ukuphucula umgangatho wobomi wena nabahlobo bakho abane-anemilenze ngoncedo Pet Gear.
Njengoko i-ice esifubeni, izingxobo kabini wayifu- ukudala usambathisa ophezulu. Unga yenza ubungakanani, umbala, ubukhulu ye ezibandayo.
Ukusela imithombo iindawo zeplastiki, iingcango zeplastikhi, imibhobho zeplastikhi, amavili zeplastiki, njl ..